manushi laghubitta Bittiya Sanstha Limited(manushi laghubitta Bittiya Sanstha Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
मानुषी लघुवित्त नाफामा, रिजर्भमा ४२.६७%को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा २४ लाख २४ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थालाई १३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ घाटा भएको थियो। यो अवधिमा संस्थाले ३९ लाख...
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर धितोपत्र दोस्रो बजारमा भोलि सोमबारबाट कारोबारमा आउने भएको छ। मानुषी लघुवित्तको आईपीओ आज (आइतबार) नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको छ। कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत भएको दोस्रो दिनबाट धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउँछ। नेप्सेमा मानुषी लघुवित्तको कुल १०...
मानुषी लघुवित्तको सेयर रजिस्ट्रारमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट नियुक्त
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर रजिस्ट्रारमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड नियुक्त भएको छ। भदौ ७ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट मानुषी लघुवित्तको सेयर रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएको हो। योसँगै अब नेपाल एसबीआई मर्चेन्टले मानुषी लघुवित्तको सेयर दाखिला खारेज, नामसारी, धितोबन्धक, ड...
मानुषी लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड, अन्तिम नतिजा यसरी हेर्न सकिन्छ
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँड गरिएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङको कार्यालयमा आज बिहान ८ः३० बजे मानुषी लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड गरिएको हो। मानुषी लघुवित्तले गत साउन २७ गतेदेखि साउन ३१ गतेसम्म आईपीओ बिक्री गरेको थियो। यो लघुवित्तले १०० अंकित दरका कुल ३ लाख ९३...
मानुषी लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड भोलि, साढे २३ लाख बढीको हात हुने भयो खालि
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँड भोलि सोमबार हुने भएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङका अनुसार मानुषी लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड भोलि बिहान ८ः३० बजे हुनेछ। आईपीओ बाँडफाँड कार्यक्रम नेपाल एसबिआई मर्चेन्टकै कार्यालयमा राखिएको छ। मानुषी लघुवित्तले गत साउन २७ गतेदेखि...
आगामी साताभित्रै मानुषी लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड हुने
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँड आगामी साताभित्र गर्ने तयारी गरिएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका अनुसार आगामी साताभित्र मानुषी लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड गर्ने काम भइरहेको छ। ‘अहिले प्रिअलटमेन्टको काम भइरहेको छ, शुक्रबारसम्म प्रिअलटमेन्ट काम सकिन्छ’,...
मानुषी लघुवित्तको आईपीओ ८३.१० गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड, कतिले भरे ?
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ निष्कासनको अन्तिम दिन (साउन ३१ गते) सम्म ८३.१० गुणा बढीले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। संस्थाले गत साउन २७ गतेबाट जारी पुँजी १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ३६ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। संस्थाले १०० अंकित दरका कुल ३ लाख ९३...
मानुषी लघुवित्तको आईपीओ भर्न छुट्यो कि ? आज आवेदन दिने अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिन आज (साउन ३१ गते) अन्तिम दिन रहेको छ। संस्थाले गत साउन २७ गतेबाट जारी पुँजी १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ३६ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। यो आईपीओमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक...
मानुषी लघुवित्तमा अचाक्ली आकर्षण, तेस्रो दिनसम्म ६५.२ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ तेस्रो दिन शुक्रबारसम्म ६५.२० गुणा बढीले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। संस्थाले गत साउन २७ गतेबाट जारी पुँजी १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ३६ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। संस्थाले १०० अंकित दरका कुल ३ लाख ९३ हजार ७५० कित्रा...
अहिलेसम्म मानुषी लघुवित्तको आईपीओ ४८.२१ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड, कति पर्यो आवेदन ?
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ दोस्रो दिन बिहीबारसम्म ४८.२१ गुणा बढीले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। संस्थाले हिजो साउन २७ गतेबाट जारी पुँजी १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ३६ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। संस्थाले १०० अंकित दरका कुल ३ लाख ९३ हजार ७५० कित्रा...
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ पहिलो दिन नै २१.४३ गुणा बढीले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। संस्थाले आज साउन २७ गतेबाट जारी पुँजी १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ३६ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। संस्थाले १०० अंकित दरका कुल ३ लाख ९३ हजार ७५० कित्रा आईपीओ निष्कासन...
मानुषी लघुवित्तको आईपीओमा आवेदन खुला
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओमा आज साउन २७ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। संस्थाले जारी पुँजी १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ३६ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको हो। संस्थाले १०० अंकित दरका कुल ३ लाख ९३ हजार ७५० कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। जसमा जारी पुँजीको ०.५...
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओमा आउँदो साउन २७ गतेबाट आवेदन खुला गरिने भएको छ। संस्थाले जारी पुँजी १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ३६ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। संस्थाले १०० अंकित दरका कुल ३ लाख ९३ हजार ७५० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। जसमा जारी...